Monoamine တည်ငြိမ်စေသူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (-) - အရက်ကိုမှီခိုသူတစ် ဦး အပေါ်တွန်းအားအပေါ် OSU6162 - Human Laboratory Study (2015) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
တစ်ဦးကလူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှု (6162): (- -) OSU2015 အရက်မှီခိုပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာပေါ် Monoamine တည်ငြိမ်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Khemiri, Lotfi et al ။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology
Lotfi Khemiri, ပီ Steensland, Joar Guterstam, Olof Beck, Arvid Carlsson, ဂျေohan Franck, Nitya Jayaram-Lindström
2 ။ စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
2.2 ။ လေ့လာမှုဒီဇိုင်း
2.3 ။ အရက်တဏှာစမ်းသပ်ခြင်း Sessions
2.4 ။ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များ
2.5 ။ Impulse ၏အမူအကျင့်အလုပ်တခုကို
2.6 ။ စာရင်းအင်းအားသုံးသပ်ခြင်း
3.2 ။ OSU6162 cue-သွေးဆောင်တဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings attenuate ဘူး
3.3 ။ OSU6162 Prime-သွေးဆောင်တဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings attenuated
3.4 ။ အရက်တဏှာ attenuate မှ OSU6162 များ၏စွမ်းရည်ကိုမြင့်မားတဲ့အခြေခံ Impulse နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်
3.5 ။ OSU6162 ဆေးကုနေစဉ်အရက်သောက်, တဏှာသို့မဟုတ်ခံစားချက်အပေါ်မျှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့
3.6 ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
အရက်မှီခိုဆုလာဘ်, တဏှာနှင့်အသိမှတ်ခံစားမှုပြောင်းလဲပစ်မယ့် dysregulated dopamine စနစ်ဖြင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါ monoamine stabilizer (-) - OSU6162 (OSU6162) hyper- နှင့် hypo-dopaminergic ပြည်နယ်များနှစ်ဦးစလုံးတန်ပြန်နိုင်ပြီးကျနော်တို့မကြာသေးမီကကြောင့်ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်အရက်-mediated အပြုအမူတွေ attenuates ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အဆင့် II ကိုရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue- နှင့်သွေးဆောင် priming တဏှာအပေါ် OSU6162 များ၏သက်ရောက်မှုကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမှစုံစမ်းစစ်ဆေး။
သူတို့ရဲ့အခြေခံ Impulse အဆင့်ဆင့်ဟာ Stop Signal Task ကိုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီးမှငါးဆယ်ခြောက်ယောက်အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ OSU14 သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာတစ် 6162 ရက်ကြာ-ကုသမှုကာလမှ randomized ခဲ့ကြသည်။ ii) ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့် iii) Prime, အရက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တွေကို - - တစ်ဦးအရက်အဖျော်ယမကာများစားသုံးမှု (15 ဆအီသနော / ကီလိုဂရမ် bodyweight) ဈ) တက်ကြွစွာ: နေ့ 0.20 တွင်, သင်တန်းသားများအားဖြင့်သွေးဆောင်တဏှာအစည်းအဝေးများပါဝင်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းအရက်တဏှာစမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည် ။
အရက်တဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings အရက်မေးခွန်းလွှာများနှင့်အမြင်အာရုံ analogue အကြေးခွံ (vas) အတွက် Desire ၏အတိုဗားရှင်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ OSU6162-ကုသမှု cue-သွေးဆောင်အရက်သေစာတဏှာမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်သိသိသာသာတဏှာ-သွေးဆောင် priming attenuated ။ ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားတဲ့အခြေခံ Impulse နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, OSU6162 သိသိသာသာကိုလောင်အရက် (vas) ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကြိုက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ ပစ္စုပ္ပန် 14 ရက်ကြာ-ကုသမှုကာလဖြစ်သော်လည်း OSU6162 လုံခြုံပြီးကောင်းစွာဒဏ်ခံခဲ့ကြောင်းပြသ, ဤရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုအရက်သောက်ထိခိုက် OSU6162 များ၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ပိုကြီးတဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ထိရောက်မှုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုထပ်မံအရက်မှီခိုများအတွက်ဝတ္ထုဆေးဝါးအဖြစ် OSU6162 ၏အလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အရက်, စှဲမွဲမှု, တောင်းပန်, ထကြွလွယ်သော, Dopamine stabilizer, OSU6162
အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်ကမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကောင်းစွာလေ့လာ neurobiological စနစ်ဖြစ်သည်။ အရက်အပါအဝင်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်လူတန်းစား, (ယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Boileau et al ။ , 2003, di Chiara နှင့် Imperato, 1988, Imperato နှင့် Di Chiara, 1986), dopamine D ကိုသက်ဝင်2 receptors (Nowak et al ။ , 2000). အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) သုံးပြီးဦးနှောက်-ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ dopamine D2 receptors ၏ရရှိမှုတစ်လျှော့ချရေးကိုလည်း relapse များအတွက်နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ရသောနာတာရှည်အရက်စားသုံးမှုအားဖြင့်သွေးဆောင်တစ်ဦးအစားထိုးချ-စည်းမျဉ်းကိုထင်ဟပ်ဖို့အကြံပြုထုတ်ဖော်ပြသကြ (Heinz et al ။ , 2009, Heinz et al ။ , 2005, Volkow et al ။ , 1996) ။ အရက်-related တွေကိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာအပြင်လူ့လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် dopamine ကမောက်ကမဖြစ်မှု (relapse များအတွက်တိကျသောတွေကိုနှင့်အန္တရာယ်တစ်ခုအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုထင်ဟပ်, အရက်တဏှာ၏ပြင်းထန်မှုအဖြစ်ဦးနှောက် striatal ဒေသများတွင်တစ်ခုတိုးလာ activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်Heinz et al ။ , 2004). ထို့အပွငျကမကြာသေးမီက (အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် prefrontal cortex လည်း dopamine အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ပြီသရုပ်ပြခဲ့သည်Narendran et al ။ , 2014), cortical dopamine လိုငွေပြမှုဟာမှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း (ဥပမာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျှော့ချ) အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီတွင်တွေ့မြင် (စတိန်းနှင့် Volkow, 2011, Stavros et al ။ , 2012) ။ တကယ်တော့မကြာသေးခင်လေ့လာမှုများအရက်မှီခို၎င်းတို့၏ putative ဆက်စပ်မှုကိုနားလည်စေခြင်းငှါ, dopamine စနစ်နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲစပ်လျဉ်းအာရုံကြောလင့်များ၏ဂယက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ ရလဒ်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ညွှန်ပြ, အရက်တစ်ခုခြီးမွှောကျပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှု (Impulse တိုးလာLeeman et al ။ , 2014) နှင့်တိုးမြှင့် dopamine အဆင့်ဆင့် (Boileau et al ။ , 2003), (ထို Impulse အကြံပြုခြင်းဒစ်ခ် et al ။ , 2010) နှင့်အရက်ဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှု (Crabbe et al ။ , 2010) အရက်မှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ dopamine system ကိုယခင်ကသို့သော်အစဉ်အလာ dopamine ရန်နှင့် agonists နှင့်အတူလေ့လာမှုများ (တားပြီ, အရက်မှီခိုများအတွက်အလားအလာကုသမှုပစ်မှတ်အဖြစ်အကဲဖြတ်ထားသည်ဆွစ်ဖ်, 2010)။ dopamine ရန် (ဆိုလိုသည်မှာ neuroleptics) ၏အသုံးပြုမှုကိုထပ်မံ anhedonia နှင့်အလွန်အကျွံ dopaminergic တားစီးကနေရရှိလာတဲ့ extrapyramidal တုံ့ပြန်မှုအပါအဝင်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီက modafinil (က dopamine Transporter modulator တွေကို) နှင့် aripiprazole (သဘောတရားဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း D2-agonist (ထံမှဖွံ့ဖြိုးပြီးစီးပွားဖြစ်ဒြပ်ပေါင်းများ -) - 3PPP (Carlsson နှင့် Carlsson, 2006) (အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရက်စားသုံးမှုနှင့်တဏှာကိုလျော့ချဖို့ပြသထားသည်Joos et al ။ , 2013, Martinotti et al ။ , 2009, Martinotti et al ။ , 2007, Myrick et al ။ , 2010, Schmaal et al ။ , 2013, Voronin et al ။ , 2008) ။ ဤရလဒ်သည်အရက်မှီခို၏ထိရောက်မှုကုသမှုများအတွက်ပြည့်စုံဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောကျသောကိုင်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောကင်းသော dopamine အေးဂျင့်များကဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ monoamine stabilizer (-) - OSU6162 (OSU6162) (Carlsson et al ။ , 2004, Sonesson et al ။ , 1994) - - လှုံ့ဆော်ဖိနှိပ်ဒါမှမဟုတ်ရေပန်းစား dopaminergic သေံပေါ် မူတည်. အဆိုပါ dopamine လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပြသနိုင်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူ 3PPP), (နေနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါပဲ။ ဤအယူအဆ [OSU6162-တာဟာမြင့်သောအခြေခံတန်ဖိုးများနှင့်အတူမျောက်အတွက် striatal L- [11C] DOPA ရောက်လာမှုနှုန်းနှင့်တစ်ဦးတိုးလာ striatal L- အတွက်လျော့ချရေးနှင့်အတူတစ်ဦး dopaminergic သေံ-မှီခိုအကျိုးသက်ရောက်မှုသွေးဆောင်ဘယ်မှာမျောက်တွေကိုတစ်ပေလေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး postulated ခဲ့သည် အနိမ့်အခြေခံတန်ဖိုးများနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက် 11C] DOPA ရောက်လာမှုနှုန်း (Tedroff et al ။ , 1998) ။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားသို့သော်လုံးဝနားလည်သဘောပေါက်နှင့်ပေမယ့်မထားဘူး စသည်တို့အတွက် လေ့လာမှုများ OSU6162, aripiprazole ကဲ့သို့ D2-receptors (မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အဖြစ်ပြုမူကြောင်းညွှန်ပြKara-et al ။ , 2010, Seeman နှင့်ဂွမ်, 2007), အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ (ဝင်းမဆိုအခ်ါလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြNatesan et al ။ , 2006, Sonesson et al ။ , 1994) ။ အဲဒီအစားသူက OSU6162 နှစ်ဦးစလုံး presynaptic autoreceptors နှင့် postsynaptic D ကိုမှာရန်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် function ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်2 receptors (Carlsson et al ။ , 2004, Lahti et al ။ , 2007, တဘက်တချက် et al ။ , 2008, Sonesson et al ။ , 1994) OSU6162 (ကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ပျော့ပြင်းထန်မှု၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူဆေးခန်းလုံခြုံဖြစ်ပေါ်လာသောRodriguez et al ။ , 2004) နှင့်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဒဏ်ရာအောက်ပါဥပမာ Huntington ရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်အတူလူနာ (Johansson et al ။ , 2012, Kloberg et al ။ , 2014, Tedroff et al ။ , 1999) ။ ထို့ကြောင့်ရိုးရာ D6162 ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ OSU2 ၏အားသာချက်တစ်ခု, (extrapyramidal တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ,Carlsson နှင့် Carlsson, 2006).
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကကြောင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သုံးစွဲမှု, အရက်ရှာ, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်ရှာကြံအရက်၏ cue / Prime-သွေးဆောင် reinstatement attenuates ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံအလားအလာဝတ္ထုဆေးဝါးအဖြစ် OSU612 ဖော်ထုတ် (Steensland et al ။ , 2012) ။ ထို့အပြင်အရက်မှီခိုဘို့သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ဒေသများအတွက် dopamine system ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ OSU6162 ရဲ့အလားအလာ OSU6162 ဦးစားခြင်း (striatum အတွက် D2 / D3-receptors မှချည်နှောင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးခင်ကလူ့ပေလေ့လာမှုကထောက်ခံနေသည်Tolboom et al ။ , 2014) နှင့် ဝင်းရေရှည်သောက်သုံးကြွက်တစ် hypodopaminergic ပြည်နယ်တန်ပြန်နိုင်သောဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီ microdialysis လေ့လာမှု (Feltmann, et al ။ , စွဲဇီဝဗေဒ, 2015)။ ဤအရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုအဆင့် II ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုမှာအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue- နှင့်သွေးဆောင် priming တဏှာအပေါ် OSU6162 ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ Impulse နှင့်အရက်မှီခို (အကြားသိသိသာသာ neurobiological ထပ်ညွှန်ပြသုတေသနလုပ်ငန်းများကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်အပေါ် အခြေခံ.ဒစ်ခ် et al ။ , 2010, Lejuez et al ။ , 2010) နှင့် Impulse ကုသမှုရလဒ်ကို (၏အရေးပါသောခန့်မှန်းကြောင်းကိုသိသောဥာဏ်Joos et al ။ , 2013, Schmaal et al ။ , 2013, Voronin et al ။ , 2008) ငါတို့သည်လည်းအခြေခံ Impulse OSU6162 မှ cue reativity နှင့်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုဟောကိန်းထုတ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။
ငါးဆယ်ခြောက်ကုသမှု-ရှာကြံအရက်သေစာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအများပြည်သူကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဆေးသမားကိုသင်တန်းသားများကို '' တိကျမ်းစာ၌လာသည်အသိပေးသဘောတူညီခကျြရှာကြံမှီ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှုတ်နှင့်စာဖြင့်ရေးသားသတင်းအချက်အလက်များသည်။ လေ့လာမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲခရီးစဉ်ကိုပြီးစီးခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ 1500 ဆွီဒင် Crown (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 180 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြင့်လျော်ကြေးပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု, စတော့ဟုမ်းနှင့်ဆွီဒင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအေဂျင်စီအတွက်ဒေသဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုဥရောပလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု Database ဟာ (EudraCT; 2011-003133-34) တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါသည်, Karolinska စမ်းသပ်မဟာမိတ်အဖွဲ့များကစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောလက်တွေ့အလေ့အကျင့်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်း။
အကျဉ်းတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးပြီးနောက်အလားအလာပါဝင်သူ (ECG ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲပါဝင်သည်ဟုစိစစ်အလည်အပတ်ခရီး, စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်, သွေးနမူနာ, breathalyzer, ဆီးစမ်းသပ်မှုနှင့် electrocardiogram များအတွက်မှီခိုမှုအ Disorders ပြင်ပလူနာသုတေသနဆေးခန်း, Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ (KUH) အတွက်စတော့ဟုမ်း Center ကရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည် , Mortara စာရွက်စာတမ်း ELI150c) ။ အနည်းဆုံးအား 20 သို့မဟုတ် 55 စံအချိုရည်၏စားသုံးမှုနှင့်အတူတစ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ် (အဖြစ်သတ်မှတ်; အကျဉ်းခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီ, အရက်မှီခိုများအတွက် DSM-IV စံကျေပွန်, 45 နှင့်5နှစ်အကြားအဟောင်းကိုခဲ့ကြသည်မှာအနည်းဆုံး4မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်ရက်ပေါင်းခဲ့ (HDD ပါဝင်သည် ပါဝင်ထံမှနောက်ဆုံး 12 ပြက္ခဒိန်ရက်အတွင်း 90 အသီးသီးယောက်ျားမိန်းမတို့အဘို့အသောက်နှုန်းဂရမ်အရက်),) နှင့်လေးတစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့အရက်ကိုလောင်ဘူးနှင့်အချိန်လိုင်း Follow သို့ပြန်သွားရန် (TLFB) ကအတည်ပြုပြောဆိုသည်ပါဝင်မတိုင်မီ 14 ရက်ပေါင်းဦးရေအများဆုံး, အင်တာဗျူး ((Sobell နှင့် Sobell, 1992) နှင့် breathalyzer ။ အကျဉ်းမှာတော့ဖယ်စံရဲ့, (နီကိုတင်း မှလွဲ. ) ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါမဆိုအခြားအမျိုးအစားများအတွက်ဆေးခန်းသိသိသာသာ ECG မူမမှန်မဆိုယခင်နှလုံးရောဂါ schizophrenia, စိတ်ကြွရောဂါအဓိကစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်ရှိနေခြင်းများအတွက် DSM-IV စံ DSM-IV စံ၏ပြည့်စုံချက်ရှိကြ၏။ အဆိုပါပြည့်စုံပါဝင်မှုနှင့်ဖယ်စံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် ဖြည့်စွက်သတင်းအချက်အလက် (SI)).
ဒီနှစ်ဆမျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုများတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦး 6162 ရက်ကြာ-ကုသမှု-ကာလအတွင်း OSU14 သို့မဟုတ်လိုက်ဖက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဆေးပြား (Galenica AB, မာလ်မို, ဆွီဒင်) ကိုလက်ခံရရှိရန် randomized ခဲ့ကြသည်, အောက်ပါအချိန်ဇယားအရသိရသည်ဆေးယူညွှန်ကြားခဲ့သည်: နေ့ 1-5: 10 မီလီဂရမ်× 2; နေ့ 6-10: 15 မီလီဂရမ်× 2; နေ့ 11-14: 30 မီလီဂရမ်×2။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရက်မှီခိုသောလူဦးရေအတွက် OSU6162 အကဲဖြတ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ကုသမှုကာလ၏အရှည်ဆွီဒင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအေဂျင်စီထံမှထောက်ခံချက်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ကျပန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ကြည့်ရှု SI အသေးစိတ်ကို) ကသုတေသနပြုန်ထမ်းများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ဆေးဝါးအတွက် KUH ဆေးဆိုင်အားဖြင့်သုတေသနဆေးခန်းမှထုတ်ပေးခဲ့သည်မရှိဘဲ, Karolinska စမ်းသပ်မဟာမိတ်အဖွဲ့များကပြုလေ၏။ အဆိုပါလေ့လာမှု 14 ရက်ကြာ-ကုသမှု-ကာလနှင့်နေ့ရက်ကို 15 (စမ်းသပ်) နေ့တွင်တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းကိုအခြေခံပြီးအရက်တဏှာစမ်းသပ် session တစ်ခုအတွင်းမှာသုံးနောက်ဆက်တွဲလာရောက်လည်ပတ်သူဖွဲ့စည်း။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲလာရောက်လည်ပတ်သူ ECG, သွေးနှင့်ဆီးနမူနာစုဆောင်းခြင်း, ဆေးဝါးသာသနာ, breathalyzer စမ်းသပ်မှုများနှင့်သောက်သုံးရေ၏အစီရင်ခံ, စိတ်ဓါတ်များနှင့်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုသောက်ရေဖယ်ဘို့မြေမခံခဲ့ရပေမယ့်, ကုသမှုကာလအတွင်းသောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော်အရက်စားသုံးမှုဟာမတိုင်မီတစ်ရက်နှင့် (TLFB နှင့် breathalyzer မှတဆင့်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့) ကိုစမ်းသပ်နေ့၌ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ဘက်လိုက်မှုတားဆီးဖို့တဏှာစမ်းသပ် session တစ်ခုထဲကနေဖယ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနေ့ကသင်တန်းသားများကိုတွင်နံနက်ယံ၌သုတေသနဆေးခန်းရောက်ရှိလာသည်နှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းန်ထမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌လေ့လာမှုဆေးဝါး၏နောက်ဆုံးထိုးယူခဲ့ပါတယ်။ နီကိုတင်းနှင့်ကဖိန်းဓာတ်မရောက်မီ, ဒါပေမယ့်မစမ်းသပ်နေ့၏သင်တန်းကာလအတွင်းခွင့်ရခဲ့သည်။ အဆိုပါစွဲလမ်းစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများပြီးစီးပြီးနောက်သင်တန်းသားများသည်နေ့လယ်စာနှင့် debriefing လက်ခံရရှိပြီးသူတို့သမ္မာသတိရှိကြလော့ခဲ့ကြသည်အထိသုတေသနဆေးခန်းများတွင်နေ၏။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုမှီခိုမှုအ Disorders များအတွက်စတော့ဟုမ်းရေးစင်တာအတွင်းကုသမှုများအတွက်လွှဲပြောင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။
လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအစည်းအဝေးများ (မှပြုပြင်နေကြသည်Hammarberg et al ။ , 2009), နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထဲမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားကြသည် SI။ အရက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တွေကို, ii) ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့် iii) Prime - - တစ်ဦးအရက်အဖျော်ယမကာများစားသုံးမှု (0.20 ဆအီသနော / ကီလိုဂရမ် bodyweight) ဈ) တက်ကြွစွာ: အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, စမ်းသပ်မှုများကသွေးဆောင်သုံးတဏှာအစည်းအဝေးများဖွဲ့စည်း။
အဆိုပါ cue-အစည်းအဝေးများ (တက်ကြွစွာ cue နဲ့ကြားနေလှုံ့ဆော်မှု) ၏အမိန့်အသီးအသီးကုသမှုအုပ်စုတစ်စုအတွင်း, သင်တန်းသားများအကြား randomized နှင့်တန်ပြန်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, အရက်တဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings5နှင့် 10 မိနစ် (နှစ်ခုဆုံးစွန်သောကာလ-အမှတ်ယုတ် "Post-cue" တိုင်းတာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်) cue တင်ဆက်မှု post ချက်ချင်းအပြီးမှာရှေ့တော်၌, စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တဏှာ (အရက်မေးခွန်းလွှာများအတွက် Desire ၏တာရှည်ဆွီဒင်ဗားရှင်း (က Short-DAQ) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်et al Love ။ , 1998) (ရှစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ဟုစားပွဲတင် S1) 1 နှင့်7"" အားလုံးမှာသဘောတူမနေပါနဲ့ "နှင့်အသီးသီး," အပြည့်အဝသဘောတူ "အဖြစ်0ထံမှ 100 အထိ single-ကို item Visual Analogue စကေး (vas,) တိုင်းတာခြင်းညွှန်ပြရာခုနစ်မှတ် Likert စကေးအပေါ်သွင်းယူ သငျသညျအခုအချိန်မှာဘယ်လောက်အရက်အဘို့တဏှာတွေ့ကြုံခံစားပါသနည်း "။
အဆိုပါ cue အစည်းအဝေးများ post, အ priming session တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူပထမဦးဆုံးသောက်မပြီးမီသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးအရက်အဖျော်ယမကာတဦးငုံလုယူသောကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ ratings စုဆောင်းခဲ့ကြသည်: မတိုင်မီချက်ချင်းပြီးနောက်အဖြစ် 5, 10, 25 နှင့် 40 မိနစ်အရက်အဖျော်ယမကာပြီးသွားပြီးနောက် (ထိုလေးဆုံးစွန်သောကာလ-အမှတ်ယုတ် "post ကိုသောက်" တိုင်းတာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်) နှင့်က Short နှင့်အတူအကဲဖြတ် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ -DAQ နှင့် vas ။ ချက်ချင်းအရက်၏ပထမဦးဆုံးငုံအရင်သောက်ပြီးနောက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုကိုဖမ်းယူဖို့, vas "တဏှာ", "စိုးရိမ်ပူပန်မှု" ၏ပစ္စည်းများနှင့် "arousal" စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် "အကြိုက်" ၏တစ်ဦး vas ကို item ကိုပထမဦးဆုံး 15 သင်တန်းသားများပြီးနောက် protocol ကိုတစ်ခုပြင်ဆင်ချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ် DSM-IV (များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. စိစစ်မှာပြုလေ၏American Psychiatric Association, 2000) ။ ဆေးကုနေစဉ်စိတ်ဓါတ်များနှင့်တဏှာဟာ Montgomery-Åsbergစီးပွားပျက်ကပ်ကိုယ်ပိုင်ခဲ့သည် Rating စကေး (Madre-S က) (သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်Svanborg နှင့် Asberg, 2001) နှင့် Penn အရက်တဏှာစကေး (PACS) (Flannery et al ။ , 1999), အသီးသီး။ အရက်သောက်ပါဝင်များနှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့ကရာခိုင်နှုန်းက HDD (TLFB Self-အစီရင်ခံစာ) နှင့် phosphatidylethanol (S-PEth) (လက်တွေ့ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်း, KUH အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်အကြားအပြောင်းအလဲအဖြစ် quantified ခဲ့သည်။ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးရောက်ရှိခြင်းဥပမာစိတ်ကြွဆေး, ကိုကင်း, ဆေးခြောက် (THC) သို့မဟုတ် opiates ဆီး dipsticks သုံးပြီးအပတ်စဉ်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အပြုသဘောနမူနာ verification ပုဖျောပွဓာတ်ခွဲခန်းမှာကောက်ယူခဲ့သည်။ OSU6162 လိုက်နာမှုအတွက်ပလာစမာပြင်းအား (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းစနစ်ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည် SI) နောက်ဆက်တွဲခရီးစဉ်နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့ဒုတိယနှင့်ဆေးလုံးအရေအတွက်ပေါ်တိုင်းအလည်အပတ်ခရီးပေါ်မှာ။ ECG ဒုတိယနောက်ဆက်တွဲခရီးစဉ်နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့ကမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတိုင်းအတာအဖြစ်နှလုံးအထူးကုကမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
(လေ့လာမှုဆေးဝါး၏စားသုံးမှုမတိုင်မီ) ကပါဝင်ခရီးစဉ်အတွင်းသင်တန်းသားများကိုတွေ့မြင်, SST (ထို Stop Signal Task ကိုဖျော်ဖြေ SI အတိုင်းအတာများအသေးစိတ်ကို), ကျယ်ပြန့် Impulse တစ်ဦးအတိုင်းအရှည် (အဖြစ်အသုံးပြုမယ့်ကွန်ပျူတာ neuropsychological စမ်းသပ်မှုများအတွက်Aron et al ။ , 2003, DeVito et al ။ , 2009) ။ အကျိုးစီးပွား၏အကျိုးရလဒ်မှတ်တိုင် signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန် (SSRT) တစ်ဦး prepotent တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့သင်တန်းသားများကို '' စွမ်းရည် -a အတိုင်းအတာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ (ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီအတွက် SSRT ရမှတ်များ၏ပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအပေါ်အခြေခံပြီး, မြင့်သောသို့မဟုတ်ထကြွလွယ်သောအနိမ့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရJoos et al ။ , 2013, Schmaal et al ။ , 2013).
အဆိုပါမူလတန်းရလဒ်များဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းတဏှာသည်, အသီးသီး (ဈ) စုစုပေါင်းက Short-DAQ နှင့် (ii) vas ရမှတ်များရှိကြ၏။ ဒေတာများအကြား-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်ကုသမှု (OSU6162 သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) နဲ့ရောထွေး ANOVAs သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များအဓိက-သွေးဆောင် session များအတွက်အခြေအနေ (တက်ကြွ, ကြားနေ) နှင့် (မီ, ချက်ချင်းအပြီးနဲ့ post-သောက်) သည် cue-သွေးဆောင်အစည်းအဝေးများနှင့်အချိန်အဘို့အချိန် (မတိုင်မီချက်ချင်းအပြီးနဲ့ post-cue) တို့ဖြစ်သည်။ ကုသမှုသို့မဟုတ်အခြေအနေနှင့်အပြန်အလှန်၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ထပ်ဘယ်မှာသင့်လျော်သော, ကျောင်းသားရဲ့ unpaired သို့မဟုတ်တွဲ t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအရက်ငုံ (priming-session တစ်ခု) ပြီးနောက် vas ပစ္စည်းများအနေဖြင့်ဒေတာများကုသမှုအုပ်စုများအကြားရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်သီးခြားကျောင်းသားရဲ့ unpaired t-စမ်းသပ်မှုများကသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာဆန်းစစ်တစ်ဦးအတွက်, သီးခြား ANOVAs (ထို SSRT ၏ပျမ်းမျှအုပ်စုခွဲအပေါ်အခြေခံပြီးဆိုလိုသည်မှာမြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်ထကြွလွယ်သော (အခြေခံ Impulse ၏အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကဲဖြတ်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြJoos et al ။ , 2013; Schmaal et al ။ , 2013)) အသီးသီးတို့သည် cue- နှင့် Prime-သွေးဆောင်တဏှာစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများအနေဖြင့်ရလဒ်ပေါ်တွင်။ အရက်သောက် (HDD နဲ့ Peth) တွင်ကွာခြားချက် (PACS) စွဲလမ်းနှင့်ပါဝင်များနှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့ကိုအကြားခံစားချက် (Madre-S) ကိုကျောင်းသားရဲ့ unpaired t-စမ်းသပ်မှု အသုံးပြု. ကုသမှုအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာလူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပေမယ့်အလွန်အမင်းမှီခိုတိုင်းတာသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမှအရက်မှီခိုလူနာ OSU6162 ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ပထမဦးဆုံးရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးအစား 1 အမှားများ၏အန္တရာယ်အမျိုးအစား2အမှားအယွင်းများထက်လျော့နည်းဒုက္ခယူဆခဲ့သည်ကို၎င်း, alpha-Level uncorrected, Two-Tails, 0.05 ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေတာကို Shapiro Wilkes ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ Ocular စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ပုံမှန်အဘို့အအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် IBM က SPSS စာရင်းဇယားသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည် (ဗားရှင်း 21.0, SPSS Inc ။ , ချီကာဂို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်) ။ ကှဲလှဲ၏တန်းတူရေး (Levenes စမ်းသပ်မှုများကအကဲဖြတ်) ကိုချိုးဖောက်ခံခဲ့ရလျှင်, Welch t-စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအလင်းဆုံယူဆချက်ကိုချိုးဖောက်ခံခဲ့ရလျှင်ဖန်လုံအိမ်-Geisser ပြင်ဆင်ချက် (Mauchlys စမ်းသပ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်) လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။ ပျောက်ဆုံးနေတန်ဖိုးများကိုအစားထိုးမခံခဲ့ရပါ။ မဟုတ်ရင်မဖော်ပြထားဘူးဆိုရငျ, စံသွေဖီ±ယုတ်တန်ဖိုးများကိုအစီရင်ခံရသည်။
လေ့လာမှုစုဆောင်းမှုစက်တင်ဘာလ 2012 စတင်ခဲ့ပြီး, နှင့်နောက်ဆုံးပါဝင်သူအလည်အပတ်ခရီးဒီဇင်ဘာလ 2013 ၌ရှိ၏။ နှစ်ခုကုသမှုအုပ်စုများ (sociodemographic နောက်ခံပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူပါဝင်မှာအရက်သောက်ပုံစံများ, တဏှာနှင့်ခံစားချက်တူညီခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 1) ။ အဆိုပါ 56 Random of သည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတွင်တဦးတည်းပါဝင်သူနေ့ 1 အပေါ်တစ်ဦးပြင်းထန် relapse ပြီးနောက်ထွက်သွားပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် 55 သင်တန်းသားများ 14day-ကုသမှု-ကာလပြီးစီးခဲ့နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း, တဏှာ, ခံစားချက်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာဖြစ်သည်။ နေ့ကိုမရောက်မီ (အရက်သောက်: ခုနစ်ခုပါဝင်သူများဖြစ်သောကြောင့်၏အရက်တဏှာစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည်n= 3), စမ်းသပ်တစ်နေ့တာအတွင်းလေ့လာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြု (nopiates များအတွက်အပြုသဘောဆောင် = 1) သို့မဟုတ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ဆီးနမူနာ (n= 2) သို့မဟုတ် THC (n= 1) ။ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် session တစ်ခုမှာတော့သုံးသင်တန်းသားများကိုအရက်၏ပထမဦးဆုံးကျိုက်သောက်ပြီးနောက်လေ့လာမှုလုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့မလိုက်လျောနှင့်အရှင်ကိုသာအခြေခံများနှင့်ပထမဦးဆုံးအငုံအချိန်-အချက်များအတွက်ဒေတာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ OSU6162 အုပ်စု, သွေးနမူနာနေ့ 6162 (7 ± 38.9 ng / mL) နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့က (24.7 ± 105.0 ng / mL) ရက်နေ့တွင်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. OSU73.8 ပလာစမာအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဘယ်သူမျှမ OSU6162 ယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုကနေမဆိုသွေးနမူနာထဲမှာဘယ်အချိန်မဆို-Point မှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။
စားပွဲတင်ပါဝင်မှာဝိသေသလက္ခဏာများ 1Participant ။ ရလဒ်များမဆိုများအတွက် OSU6162- သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုယုတ် (စံသွေဖည်) အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်။ အတိုကောက်: Madre-S က-Montgomery-Åsbergစီးပွားပျက်ကပ်ကိုယ်ပိုင်ခဲ့သည် Rating စကေး; PACS-Penn အရက်တဏှာစကေး။
OSU6162 (ဎ = 28)
ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (ဎ = 28)
14 / 14 16 / 12 p = 0.60
47.3 (6.5) 45.3 (7.7) p = 0.30
13.3 (2.5) 14.1 (2.8) p = 0.26
အိမ်ထောင်သည် / Partner
54% 54% : P = 1.0
78.6% 71.4% : P = 0.54
7.1% 17.9% : P = 0.23
14.3% 7.1% : P = 0.39
နေမကောင်းခွင့် / အငြိမ်းစား
0% 3.6% : P = 0.31
68% 64% : P = 1.0
အရက်မှီခိုဘို့ DSM-IV စံ
5.2 (1.1) 5.1 (1.4) : P = 0.62
မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်နောက်ဆုံး 90 ရက်ပေါင်း (%)
73% 68% : P = 0.29
တစ်နေ့လျှင်အချိုရည်နောက်ဆုံး 90 ရက်ပေါင်း
5.8 (2.2) 5.7 (2.4) : P = 0.88
9.2 (6.8) 7.9 (6.7) : P = 0.46
11.1 (6.5) 10.4 (6.0) : P = 0.70
၏ cue-သွေးဆောင်တဏှာအစည်းအဝေးများ (က Short-DAQ အတွက် သဖန်းသီး။ 1), အခြေအနေ (F (1,45) = 76.5 ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၏p<0.001) နှင့်အချိန် (F (2,90) = 21.1;p<0.001) ဒါပေမယ့်ကုသမှု၏အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,45) = 2.1;p= 0.154) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သိသိသာသာအချိန်ရှိ၏ အခွအေနေအပြန်အလှန် (F (1.7,76.2) = 22.5;p<0.001) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကုသမှု အခြေအနေ (F (1,45) = 1.3;p= 0.262) သို့မဟုတ်အချိန် အခွအေန ကုသမှုအပြန်အလှန် (F (2,90) = 1.1;p= 0.320) ။ ထို့ကြောင့်သိသာထင်ရှားသောကုသမှုသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, post ကို hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမသက်ဆိုင်ကုသမှု၏တက်ကြွစွာနဲ့ကြားနေအစည်းအဝေးများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်ဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုအဆိုပါကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (24.0 ± 8.6 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကချက်ချင်းတက်ကြွစွာ cue (17.3 ± 8.9) ၏တင်ပြချက်အပြီးရှိ၏ t ကို (46) = - 8.0;p<0.001) အဖြစ်မတိုင်မီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (18.9 ± 9.2; t ကို (46) = - 6.0;p<0.001) နှင့်တက်ကြွ cue ၏ post ကိုတင်ဆက်မှု (19.8 ± 9.3; t ကို (46) = 5.7;p<0.001) ။ ကြားနေအနေအထားအတွင်းတိုင်းတာထားသောအချိန်အမှတ်များမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတဏှာ၏သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်မရှိပါ (မတိုင်မီ - ၁၇.၈ ± ၈.၈; ချက်ချင်းအပြီး - ၁၇.၃ - ၈.၉ နှင့် Post - ၁၇.၁ - ၈.၈) ။ VAS တပ်မက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် cue-craving အပေါ်သိသာသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ S1) အက Short-DAQ ရလဒ်များကိုမှအလားတူ (ကြည့်ရှု SI ) အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
အဆိုပါ monoamine stabilizer OSU6162 အရက်မှီခိုလူနာ cue-သွေးဆောင်တဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings attenuate ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ (က) ကြားနေနှင့် (B) မှတက်ကြွစွာ cue-သွေးဆောင်တဏှာ session တစ်ခုအတွင်းမှာအရက်မေးခွန်းလွှာ (က Short-DAQ) အတွက် Desire ၏အတိုဗားရှင်းအပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်စွဲလမ်းဆိုလို။ အဆိုပါကြားနေသို့မဟုတ်တက်ကြွ cue အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း OSU6162- နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသအုပ်စုများအကြားတဏှာမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်အသီးသီးရှိခဲ့သည်။ ဒေတာများကိုအောက်ပါအချိန်-အချက်များမှာစုဆောင်းခဲ့သည်: မတိုင်မီ5နှင့် 10 မိနစ် (နှစ်ခုဆုံးစွန်သောကာလ-အမှတ်ယုတ် "Post-cue" တိုင်းတာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်) cue တင်ဆက်မှု post ချက်ချင်းအပြီးမှာ။ တန်ဖိုးများကို sem ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်-သွေးဆောင်တဏှာ session တစ်ခုအတွင်းအရက်အဖျော်ယမကာပြီးဆုံးရန်ထိုအတောအတွင်းကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်နှင့်အတူ 8.6 မိနစ် (သုံးရာမှဘာသာရပ်များအကြား 18 မိနစ်အထိ) ခဲ့ (t ကို (42) = - 0.09;p= 0.927) ။ ယင်းက Short DAQ data တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါအချိန် (F (1.5,63.6) = 13.7 ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၏p<0.001) နှင့်ကုသမှု (F (1,43) = 4.1;p= 0.050) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအချိန် ကုသမှုအပြန်အလှန် (F (1.5,63.6) = 1.4;p= 0.255) ။ Post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် OSU6162-ကုသတစ်ဦးချင်းစီ (ပျှမ်းမျှပေါ်မှာသွန်းလောင်းပြီးဆုံးရန်9မိနစ်ကိုယူ) ကိုချက်ချင်းအရက်သောက်ပြီးသွားပြီးနောက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရှား။ ; သို့မဟုတ် post ကိုသွန်းလောင်းမပြီးမီသို့သော်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက် (အချိန်မှတ် 5, 10, 25 နှင့် 40 မိနစ်ဆိုလိုမတူညီသောကုသမှုအုပ်စုများအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည် သဖန်းသီး။ 2တစ်ဦးက) ။ အဆိုပါ vas ဒေတာအတွက် (သဖန်းသီး။ 2B) မှအချိန် (F (1.6,70,2) = 29,2 ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၏p<0.001) နှင့်ကုသမှုများအတွက်အရေးပါမှုဆီသို့လမ်းကြောင်းသစ် (F (1,43) = 3.3;p= 0.075) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအချိန် ကုသမှုအပြန်အလှန် (F (1.6, 70,2) = 0.85;p= 0.412) ။
အဆိုပါ monoamine stabilizer OSU6162 အရက်မှီခိုလူနာ Prime-သွေးဆောင်တဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings attenuated ။ (က) အရက်မေးခွန်းလွှာ (က Short-DAQ) နှင့် Prime-သွေးဆောင်တဏှာ session တစ်ခုအတွင်းမှာ (ခ) vas တဏှာကို item အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် "တဏှာ" ၏ (C) vas-ပစ္စည်းများ, "များအတွက် Desire ၏အတိုဗားရှင်းအပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုဆိုလိုတာ အရက်၏ပထမဦးဆုံးငုံအရင်သောက်ပြီးနောက် "," စိုးရိမ်ပူပန်မှု "နှင့်" arousal "like နှိပ်။ သိသိသာသာ rated အဆိုပါ OSU6162-ကုသအုပ်စုသည်နိမ့်တဏှာ (က Short-DAQ) ချက်ချင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသအုပ်စုသည် (က) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါအရက်သောက်ပြီးနှင့် OSU6162- အတွက်လျော့နည်းသွားတဏှာကိုဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းသုံးပြီးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည် တစ်ချိန်တည်း-အမှတ် (B) မှမှာ vas ။ အဆိုပါ OSU6162 အုပ်စုတစ်စုနောက်ထပ်သိသိသာသာနိမ့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကြိုက် rated နှင့်အနိမ့်တဏှာဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်, အရက် (ကို C) ​​၏ပထမဦးဆုံးအငုံအရင်သောက်ပြီးနောက်။ လေးခုဆုံးစွန်သောကာလ၏ယုတ်သောက်မီ, ပထမဦးဆုံးငုံအရင်သောက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းအရက်အဖျော်ယမကာပြီးသွားတဲ့အဖြစ်အရက်အဖျော်ယမကာများ 5, 10, 25 နှင့် 40 မိနစ် post ကိုစားသုံးမှု (: ဒေတာများကိုအောက်ပါအချိန်-အချက်များမှာစုဆောင်းခဲ့သည် -points) "post ကိုသောက်" တိုင်းတာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တန်ဖိုးများကို sem ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်; *p<0.05 သက်ဆိုင်ရာရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အဆိုပါအရက်အဖျော်ယမကာ (ထံမှပထမဦးဆုံးငုံအရင်သောက်ပြီးနောက်သဖန်းသီး။ 2; 6162 - ကို C), OSU31 တစ်ဦးချင်းစီကိုသိသိသာသာနိမ့်သည့်အရက်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကြိုက် (t ကို (2.27) = အစီရင်ခံကုသp= 0.031) နှင့်အနိမ့်တဏှာ (t ကို (46) = ဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ် - 1.88;p= 0.066) arousal (t ကို (46) = နှင့် ပတ်သက်. ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့စဉ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ - 1.29;p= 0.205) သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန် (t ကို (46) = - 0.24;p= 0.814) ။
အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် မြင့်သော အခြေခံ Impulse သည် cue-သွေးဆောင်တဏှာအစည်းအဝေးများအနေဖြင့်က Short-DAQ အချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုသမှု (F (1,22) = 4.5 ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား;p= 0.044), ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကုသမှု အခွအေနေအပြန်အလှန် (F (1,22) = 1.4;p= 0.248) သို့မဟုတ်အချိန် အခွအေန ကုသမှုအပြန်အလှန် (F (1.5,32.2) = 0.93;p= 0.377) ။ Post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမြင့်ထကြွလွယ်သော OSU6162-ကုသတစ်ဦးချင်းစီရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာနိမ့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ချက်ချင်းအပြီးတဏှာ, နဲ့ post (အ5နှင့် 10 မိနစ်အချိန်မှတ်၏ဆိုလို) ကိုကြားနေ cue ၏တင်ဆက်မှု rated ကြောင်းထင်ရှား (သဖန်းသီး။ 3တစ်ဦးက,) panel ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ တက်ကြွစွာ cue session တစ်ခုမှာ OSU6162- အတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းသာတက်ကြွစွာ cue ၏တင်ဆက်မှု post (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိ၏သဖန်းသီး။ 3တစ်ဦးကညာဘက် panel က) ။ အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အနိမ့် အခြေခံ Impulse သို့သော်ကုသမှု (F (1,21) = 0.16 မရှိသိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၏p= 0.695), နှင့်မျှမတို့သိသာထင်ရှားသောကုသမှု အခြေအနေ (F (1,21) = 0.152;p= 0.701) သို့မဟုတ်အချိန် အခွအေန ကုသမှု (F (2,42) = 0.275;p= 0.761) interaction က (သဖန်းသီး။ 3B က) ။ အဆိုပါ vas ဒေတာအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုခြင်း (က Short-DAQ ရလဒ်များကိုမှအလားတူအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့ထကြွလွယ်သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue-သွေးဆောင်တဏှာအပေါ်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများလြှော့ SI; သင်္ဘောသဖန်း။ S2).
အဆိုပါ monoamine stabilizer OSU6162 မြင့်သောအခြေခံ Impulse နှင့်အတူအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue-သွေးဆောင်တဏှာ attenuated ။ cue-သွေးဆောင်တဏှာအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း (က) မွငျ့မားနှင့် (ခ) အနိမ့်ထကြွလွယ်သောအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရက်မေးခွန်းလွှာ (က Short-DAQ) အတွက် Desire ၏အတိုဗားရှင်းအပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်စွဲလမ်းဆိုလို။ (က) OSU6162 သိသိသာသာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီကိုချက်ချင်းပြီးနောက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြင့်ဆုံးသောထကြွလွယ်သောအရက်ထဲမှာတဏှာလျှော့ချ, နှင့်ကြားနေ cue ၏တင်ဆက်မှုအဖြစ်အဆိုပါအရက် cue တင်ဆက်မှု၏ post ကိုတင်ဆက် post ။ (ခ) တဏှာအတွက်အဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်အနိမ့်ထကြွလွယ်သောအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် OSU6162 နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒေတာများကိုအောက်ပါအချိန်-အချက်များမှာစုဆောင်းခဲ့သည်: မတိုင်မီ5နှင့် 10 မိနစ် (နှစ်ခုဆုံးစွန်သောကာလ-အမှတ်ယုတ် "Post-cue" တိုင်းတာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်) cue တင်ဆက်မှု post ချက်ချင်းအပြီးမှာ။ တန်ဖိုးများကို sem ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်; *p<0.05 သက်ဆိုင်ရာရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အတူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်က Short-DAQ အချက်အလက်များ၏ Prime-သွေးဆောင်တဏှာ session တစ်ခုမှာတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ မြင့်သော အခြေခံ Impulse ကုသမှု (F (1,20) = 9.8 ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်;p= 0.005) နှင့်အချိန် (F (1.3,26.0) = 8.8;p= 0.004) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအချိန် ကုသမှုအပြန်အလှန် (F (1.3,26.0) = 2.5;p= 0.116) ။ Post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် OSU6162 အုပ်စုတစ်စုလုံးကိုတိုင်းတာအချိန်မှတ် (အနည်းဆုံးသိသိသာသာနိမ့်သည့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုထက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသဖန်းသီး။ 4တစ်ဦးက,) panel ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ဆနျ့ကငျြနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အနိမ့် အခြေခံ Impulse (သဖန်းသီး။ 4B က, လက်ဝဲ panel က), အချိန် (F (2,42) = 4.3 ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ရှိ၏p= 0.021) ပေမယ့်ကုသမှု (F (1,21) = 0.12 မရှိသိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု;p= 0.731) သို့မဟုတ်အချိန် ကုသမှုအပြန်အလှန် (F (2,42) = 0.428;p= 0.639) ။ အဆိုပါ vas ဒေတာက Short-DAQ ရလဒ်များကိုမှအလားတူအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့ထကြွလွယ်သောတစ်ဦးချင်းစီ (ထဲမှာ priming-သွေးဆောင်တဏှာအပေါ်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများလြှော့သဖန်းသီး။ 4A နှင့် B, အလယ်တန်းပြား; မြင် SI ) အပြည့်အဝစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Prime-သွေးဆောင်တဏှာ attenuate ဖို့ monoamine stabilizer OSU6162 ရဲ့စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့အခြေခံ Impulse နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်-သွေးဆောင်တဏှာ session တစ်ခုအတွင်းမှာ (က) မွငျ့မားနှင့် (ခ) အနိမ့်ထကြွလွယ်သောအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရက်မေးခွန်းလွှာ (Short-DAQ) အတွက် Desire နှင့် vas တဏှာကို item ၏အတိုဗားရှင်းအပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်စွဲလမ်းဆိုလို။ အရက်၏ပထမဦးဆုံးငုံ (ညာ panel က) အပြီးတဏှာအပါအဝင် Prime-သွေးဆောင်တဏှာ session တစ်ခုအတွင်းမှာရလဒ်များအရအိပ်ယာ, နှိုင်းယှဉ်မြင့်ထကြွလွယ်သောအရက်ထဲမှာ (က) OSU6162 သိသိသာသာလျှော့ချတဏှာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ။ (ခ) တဏှာအတွက်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွာခြားချက် OSU6162- နှင့်အနိမ့်ထကြွလွယ်သောအရက်ထဲမှာရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသအုပ်စုတစ်စုမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအကြားမည်သည့်အချိန်-Point မှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။ လေးခုဆုံးစွန်သောကာလ၏ယုတ်သောက်မီ, ပထမဦးဆုံးငုံအရင်သောက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းအရက်အဖျော်ယမကာပြီးသွားတဲ့အဖြစ်အရက်အဖျော်ယမကာများ 5, 10, 25 နှင့် 40 မိနစ် post ကိုစားသုံးမှု (: ဒေတာများကိုအောက်ပါအချိန်-အချက်များမှာစုဆောင်းခဲ့သည် "post ကိုသောက်" တိုင်းတာ) .Values ​​sem ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်အဖြစ် -points သတ်မှတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, *p<0.05 နှင့် **p<0.01 သက်ဆိုင်ရာရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
t ကို (6162) = 22: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (High နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ vas တဏှာကို item ပေါ်တွင်သိသိသာသာနိမ့် rated အနိမ့်အမြင့်ဆုံး, ဒါပေမယ့်ဘဲ, အခြေခံ Impulse နှင့်အတူအရက်၏ပထမဦးဆုံးငုံအရင်သောက်ပြီးနောက်, OSU2.9-ကုသတစ်ဦးချင်းစီ သဖန်းသီး။ 4တစ်ဦးကညာဘက် panel ကို; အနိမျ့: t ကို (22) = - 0.45, သဖန်းသီး။ 4B ကညာဘက် panel က) ။ အမြင့်ဆုံးသောမနိမ့်ထကြွလွယ်သောတစ်ဦးချင်းစီ (မအတွက်အရက်၏ပထမဦးဆုံးငုံအရင်သောက်ပြီးနောက်အကဲဖြတ်အခြား vas ကို item ကိုမဆိုအတွက်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 4A နှင့် B, ညာပြား) ။
အဆိုပါ 14- နေ့က-ကုသမှု-ကာလအတွင်း OSU6162 အုပ်စုကိုသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းက HDD (t ကို (73) = 19 27 မှ 9.9 မှမိမိတို့သောက်သုံးလျှော့ချ;p<0.001) 0.83 ကနေ 0.60 (t (27) = 2.7) မှသွေးရည်ကြည် PEth အဆင့်ဆင့်သိသိသာသာလျှော့ချရေးအားဖြင့် paralleled;p= 0.012) ။ သိသာထင်ရှားသောအဆိုပါရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုရာခိုင်နှုန်းက HDD (t ကို (68) = 10 26 မှ 15.9 မှမိမိတို့သောက်သုံးလျှော့ချ;p<0.001) နှင့် 0.69 ကနေ 0.54 မှသွေးရည်ကြည် PEth အဆင့်ဆင့် (t (26) = 2.5 အတွက်);p= 0.020) ။ ; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -6162 ± 54.6: သို့သော်ရာခိုင်နှုန်းက HDD (OSU0.29 အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်. ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိကြ၏ -57.6 ± 0.19; t ကို (46.4) = - 0.45;p= 0.658), သွေးရည်ကြည် PEth အဆင့်ဆင့် (OSU6162: -0.23 ± 0.45; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ: -0.15 ± 0.31; t ကို (48.4) = - 0.77;p= 0.447), PACS ရမှတ် (OSU6162: -4.9; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ: -4.2; t ကို (53) = - 0.541;p= 0.591) သို့မဟုတ် Madre-S က (OSU6162: -3.6; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ: -2.9; t ကို (53) ဂိုးသွင်း = - 0.641;pကုသမှုကာလအတွင်း = 0.524) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုအရက်သောက်, တဏှာသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များရလဒ်များအပေါ်မျှသိသာထင်ရှားသောကုသမှုသက်ရောက်မှုသင်တန်းသားများကို high- နှင့်အနိမ့်ထကြွလွယ်သောတစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားသောအခါကုသမှုကာလအတွင်းရှိခဲ့သည် (ကိုကြည့်ပါ SI စာရင်းအင်းအသေးစိတ်ကို) ။
အဆိုပါ OSU6162 ကုသမှုလေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဆိုအစီရင်ခံစာများမရှိဘဲယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းစွာဒဏ်ခံနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအစီရင်ခံစာများ (ဥပမာခေါင်းကိုက်, အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာတွေ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် vertigo) (၏ကြိမ်နှုန်းမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်စားပွဲတင် S2) ။ ; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -6162: စမ်းသပ်မှုနေ့ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြမှာ ECG ၏နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ OSU6162 အဖွဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုသည် (OSU7.6 နှိုင်းယှဉ်နှလုံးခုန်နှုန်းအတွက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးလျော့နည်းသွားခဲ့ကြောင်းပြသ -0.15; t ကို (52) = - 2.6; p= 0.013) ။ ; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -6162 ms: QTc အပြောင်းအလဲများအတွက်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက်ကုသမှုအုပ်စုများ (OSU1.8 အကြားရှာတွေ့ခဲ့သည် -3.9 ms; t ကို (48) = 0.32; p= 0.752) ။
ပစ္စုပ္ပန်လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ, အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတဏှာအဖြစ်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအရက်သုံးစွဲခြင်းရလဒ်များ, ပေါ် monoamine stabilizer OSU6162 ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပထမဆုံးအကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များသိသိသာသာပုဂ္ဂလဒိဋ္ attenuated ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် OSU6162 သည်, ကျွမ်းလောင်အရက်၏ '' like နှိပ် 'နှင့်တဏှာ, အခြေခံ Impulse ၏မြင့်မားနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်မောင်းနှင်ထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု-သွေးဆောင် priming ကြောင်းခဲ့ကြသည်။ အတူတူ OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်အရက်-mediated အပြုအမူတွေ attenuates ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ရလဒ်များမှာ (အတူSteensland et al ။ , 2012), ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များ dopamine စနစ်၏ pharmacological တည်ငြိမ်အရက်သေစာမှီခိုနှင့် OSU6162 အရက်မှီခိုများအတွက်ဝတ္ထုဆေးဝါးအဖြစ်အလားအလာရှိသည်အံ့သောငှါအကျိုးကိုမောင်းနှင်အပြုအမူတွေအချို့ကိုပြောင်းလဲပစ်အတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြအံ့သောငှါဖော်ပြသည်။
OSU6162 cue-သွေးဆောင်အရက်သေစာတဏှာမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်သိသိသာသာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Prime-သွေးဆောင်တဏှာကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ cue-သွေးဆောင်တဏှာပေါ်ကုသမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်၏မရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်အရက်များအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ cue-တဏှာတုံ့ပြန်မှုအလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (အဘို့ထက်လျော့နည်းကြံ့ခိုင်သောအတိုင်းအတာများစိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်Lingford-Hughes et al ။ , 2006) ။ က Short-DAQ အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ Prime-သွေးဆောင်တဏှာအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းအမှန်ပင်သင်တန်းသားများကိုအရက်အဖျော်ယမကာကိုလက်စသတ်ခဲ့ချက်ချင်းပြီးနောက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် OSU6162 ကုသမှုအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့တဏှာတစ် vas သုံးပြီးအကဲဖြတ်သောအခါ, (တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ပေမယ့်) မျှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ OSU6162 priming-သွေးဆောင်တဏှာအဖြစ်အရက်၏အကြိုက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသောတွေ့ရှိချက်များအရက်ကိုလောင်အခါဒီအေးဂျင့်များ၏ dopamine တည်ငြိမ်ဂုဏ်သတ္တိများထင်ရှားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကြွက်များတွင်အရက်-mediated အပြုအမူတွေ attenuate မှ OSU6162 ရဲ့စွမ်းရည်ကိုနောက်ကွယ်မှယန္တရား (Steensland et al ။ , 2012လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတင်ဆက်အဖြစ်) နှင့်အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီပစ္စုပ္ပန်မှာအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်။ ဒါဟာ OSU6162 တစ် nonspecific ထုံးစံ၌အထွေထွေစိတ်ခံစားမှုတုံးစေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ OSU6162 စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ် arousal မသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့စဉ်ကတည်းကသို့သော်ဤမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင် microdialysis လေ့လာမှု (OSU6162 အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အရက်-သွေးဆောင် dopamine output ကို blunts ကြောင်းပြသSteensland et al ။ , 2012), OSU6162 အရက်၏အကျိုးဂုဏ်သတ္တိများ attenuate ရန်အလားအလာရှိသည်အံ့သောငှါညွှန်ပြ။ ဤသည်မှာအကြံပြုချက် OSU6162 အဆိုပါစားသုံး alcoho ၏ "အကြိုက်" attenuated ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ကထောက်ခံနေသည်l ။ ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုပြီးမကြာသေးမီ microdialysis လေ့လာမှု (Feltmann et al ။ , စာနယ်ဇင်းအတွက်), (OSU6162 မဟုတ်ဘဲအရက်မှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ် striatum အတွက် hypo-dopaminergic ပြည်နယ်တန်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိစေခြင်းငှါကွောငျးဖျောပွသNarendran et al ။ , 2014, Tupala et al ။ , 2001, Volkow et al ။ , 2007, Volkow et al ။ , 1996) ။ အရက်-ရင်တော့မှားမယ် (တစ်ဦးအရက်-စိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန်အတွက် dopamine output ကိုအပေါ် OSU6162 ကုသမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများSteensland et al ။ , 2012) တစ်ခုထူထောင် hypo-dopaminergic ပြည်နယ်နှင့်အတူရေရှည်သောက်သုံးကြွက် vs (Feltmann et al ။ , စာနယ်ဇင်းအတွက်), အရေပန်းစားသေံပေါ် မူတည်. dopamine လှုံ့ဆော်သို့မဟုတ် attenuate မှ OSU6162 ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ dopamine လှုပ်ရှားမှုတည်ငြိမ်မှ OSU6162 ရဲ့စွမ်းရည်ကိုနောက်ထပ် (မျောက်တွေကိုတစ်ပေလေ့လာမှုကထောက်ခံနေသည်Tedroff et al ။ , 1998) ။ OSU6162 ရဲ့တည်ငြိမ်နိုင်စွမ်းလူသားများတွင်ပြသခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲ, ဖြစ်သော်လည်းက dopamine ချို့တဲ့တစ်ခု OSU6162-သွေးဆောင်ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်သည် dopamine ချို့တဲ့ရှိပါတယ်အဖြစ် OSU6162, မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် priming-သွေးဆောင်အရက်သေစာတဏှာကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုရှင်းပြနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖို့သွေးဆောင် (တဏှာမောင်းနှင့်ပြန်သွားကြသည်အထောက်အကူပြုရန်အကြံပြုခဲ့Koob, 2013).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ Prime-သွေးဆောင်အရက်သေစာတဏှာတုံးမှ OSU6162 ရဲ့စွမ်းရည်ကိုသာ Impulse မြင့်မားအခြေခံ Level ဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီ၌တွေ့သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Impulse နှင့်အရက်မှီခိုအကြားတစ်ဦးက neurobiological ထပ်တူအကြံပြုထားသည် (ဒစ်ခ် et al ။ , 2010, Lejuez et al ။ , 2010) နှင့်အလားအလာရေရှည်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော cortical dopamine လိုငွေပြမှု, (အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်စတိန်းနှင့် Volkow, 2011, Stavros et al ။ , 2012) ။ Impulse ရိုနှင့်ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှစ်ဦးစလုံး (ပိုမိုမြင့်မား cue-သွေးဆောင်အရက်သေစာတဏှာကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းထို့ပြင်တွေ့ရှိချက်Papachristou et al ။ , 2013) အနိမ့်ထကြွလွယ်သောထက်ဆိုလိုသည်မှာ) ကို cue- သို့မဟုတ် priming-ထိတွေ့မှုမှအကြောင်းမဲ့မခံရမီကသူတို့ရဲ့အခြေခံပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ၏တသမတ်တည်းပိုမိုမြင့်မားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ခဲ့ရသည်, ထိုရလဒ်များအရအိပ်ယာ-ကုသမြင့်မားသောထကြွလွယ်သောသင်တန်းသားများကိုဖေါ်ပြခြင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကထောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် (ထိုရေပန်းစား dopaminergic သေံအပေါ်အခြေခံပြီး dopamine လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိဖို့ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများနှင့် OSU6162 ရဲ့ထူးခြားတဲ့ pharmacological ပရိုဖိုင်းကိုထိန်းညှိအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားCarlsson et al ။ , 2004, Sonesson et al ။ , 1994, Tedroff et al ။ , 1998), က OSU6162 ရဲ့မြင့်မားထကြွလွယ်သောအရက်ထဲမှာတဏှာပိုမိုအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းစီပေါ်မှာဤသတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုအလားအလာ hypodopaminergic ပြည်နယ်၏ function ကိုတို့ကရှင်းပြခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအယူအဆနောက်ထပ် OSU6162-ကုသမြင့်မားသောထကြွလွယ်သောသင်တန်းသားများကို Prime-session ရဲ့မစတင်မှီ ie အခြေခံမှာကိုလည်း-ကုသရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိချက်ကထောက်ခံသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုနောက်ထပ်ကြောင့်အရက်အကြံပြုအနိမ့် dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ် သာ. ကြီးချို့ယွင်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြပြီး, အရှင်ထိုကဲ့သို့သော OSU6162 အဖြစ် dopaminergic အေးဂျင့်ကနေအကျိုးခံစားရဖို့ကပိုများပါတယ်။ Impulse ကိုထိခိုက်ဖို့ OSU6162 များ၏စွမ်းရည်, ဖြစ်သော်လည်း se နှုန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း, ယခင်လေ့လာမှုများ (modafinil ကျန်းမာရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ရပ်တန့် signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပါအဝင် neuropsychological တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းပြသTurner et al ။ , 2003) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တုန့်ပြန်တားစီး (Schmaal et al ။ , 2013), နှင့်ပြန်သွားကြသည်ဖို့အချိန်ရှည်ရှည် (Joos et al ။ , 2013) မြင့်မားတဲ့, ဒါပေမယ့်နိမ့်မရ, အခြေခံ Impulse (SSRT) နဲ့အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ၌တည်၏။ စုပေါင်းအဲဒီရလဒ်တွေကိုထကြွလွယ်သောအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက် dopamine system ကိုပစ်မှတ်ထားအဖြစ် Impulse အရက်မှီခိုအတွက်ဆေးခန်းအရေးကြီးသော phenotype ကိုယ်စားပြုတယ်, ဤလူနာလူဦးရေအတွက် dopaminergic အေးဂျင့်အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ၏အလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ပေမယ့်တစ်ဦး 14 ရက်ကြာ-ကုသမှုကာလနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုအရက်သောက်အပေါ် OSU6162 ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို detect လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်း, နှစ်ဦးစလုံး OSU6162 နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကုသမှုအလွန်အကျွံသောက်လက်ထက်ကာလ၌ 50% လျှော့ချရေးထက်ပိုပြီးသွေးဆောင်မခံခဲ့ရပါဘူး။ အဆိုပါ OSU6162 နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု၏မရှိခြင်းအများဆုံးဖွယ်ရှိသုတေသနလေ့လာမှုအချက်ကြောင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှစွပ်စွဲတာဖြစ်ပါတယ် se နှုန်း (ထိုအရက်အသုံးပြုမှုအပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Weiss et al ။ , 2008) နှင့်အနည်းဆုံးသုံးခြောက်လမှလကုသမှုကာလယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆိုပါထိရောက်မှုတည်ထောင်ရန်နှင့်အလားအလာရှိသောဆေးဝါး၏မူးယစ်ဆေးသည်းခံစိတ်မရှိခြင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်ကြောင်း (European Medicines Agency က, 2010) ။ အမှန်စင်စစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်အတူလူနာအတွက်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက် OSU6162 ၏ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြည်းဖြည်းကုသမှု၏ကနဦးရက်သတ္တပါတ်အတွင်းမှာတက် titrated နှင့်ကုသမှုရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာ (Co-ရေးသားသူဒေါက်တာ Carlsson ကနေအတည်မပြုရသေးသောတွေ့ရှိချက်) အပြီးအထိအကျယ်ချဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရောက်ရှိပါဘူးဖော်ပြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီအခြားလူနာလူဦးရေအတွက် (Johansson et al ။ , 2012, Kloberg et al ။ , 2014, Tedroff et al ။ , 1999) OSU6162 ကုသမှုယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းစွာဒဏ်ခံခဲ့သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှသောကွောငျ့သည်းမခံနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏လေ့လာမှုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အရက်တဏှာအပေါ်လုံခြုံမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးရှိသောတွေ့ရှိချက်အရက်သောက်ရလဒ်များအပေါ် OSU6162 ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ပိုကြီးတဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ထိရောက်မှုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအတွက်ထောက်ခံမှုဆပ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ၌ဤအစောပိုင်းအဆင့် II ကိုလူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာ monoamine stabilizer OSU6162 လုံခြုံပြီးကောင်းစွာဒဏ်ခံခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်ထားဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, priming-သွေးဆောင်အရက်သေစာတဏှာအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့ attenuates ကြောင်းပြသထားတယ်။ OSU6162 ရဲ့သက်ရောက်မှုအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် dopaminergic အေးဂျင့်အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာအခြေခံ Impulse phenotyping ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ, Impulse မြင့်မားအခြေခံအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကပိုကြီးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ထိရောက်မှုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုထပ်မံအရက်မှီခိုများအတွက်ဝတ္ထုဆေးဝါးအဖြစ် OSU6162 ၏အလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
(-) - OSU6162 ဒေါက်တာ Carlsson သည့်အေ Carlsson သုတေသန AB ၏ပိုင်ရှင်နှင့်တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းကိုမူပိုင်ခွင့်ကိုပူးတွဲတီထွင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Carlsson အဘယ်သူမျှမကအခြားပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများမိန့်တော်မူ၏။ စာရေးဆရာများ Khemiri, Steensland, Guterstam, Beck, Franck နှင့် Jayaram-Lindströmမျှပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများကြေညာ။
Lotfi Khemiri1, ပီ Steensland1, Joar Guterstam1, Olof Beck2, Arvid Carlsson3, Johan Franck1* Nitya Jayaram-Lindström1
1လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန, စိတ်ရောဂါကုသမှု, Karolinska Institute က, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်၏ဌာနခွဲ
2 ဆေးပညာဦးစီးဌာန, လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ၏ဌာနခွဲ, Karolinska တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
3 Sahlgrenska Academy ကို, ဂို, ဂိုတက္ကသိုလ်, ဆွီဒင်
Lotfi Khemiri, MD
ပီ Steensland, Ph.D ဘွဲ့ကို
Joar Guterstam, MD
Arvid Carlsson, MD Ph.D ဘွဲ့ကို
Johan Franck, MD Ph.D ဘွဲ့ကို
Nitya Jayaram-Lindström, Ph.D ဘွဲ့ကို
Karolinska Institute က
KS, Solna, R5: 01
ဖက်စ်: + 46-8-12349602
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုငွေရေးကြေးရေးအ Karolinska Institute ကယ့်သုတေသနရန်ပုံငွေများ, ဆှီဒငျအရက်လက်လီမိုနိုပိုလီ (FO2012-0053) ၏သုတေသနကောင်စီသည် Torsten Söderbergဖောင်ဒေးရှင်း (M203 / 12) နှင့်ဆွီဒင်ဦးနှောက်ဖောင်ဒေးရှင်း (FO2011-0106, FO2012-0083 နှင့် FO2013 ကထောက်ခံခဲ့သည် -0042) ။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုငွေရေးကြေးရေးအ Karolinska Institute ကယ့်သုတေသနရန်ပုံငွေများ, ဆှီဒငျအရက်လက်လီမိုနိုပိုလီ (FO2012-0053) ၏သုတေသနကောင်စီသည် Torsten Söderbergဖောင်ဒေးရှင်း (M203 / 12) နှင့်ဆွီဒင်ဦးနှောက်ဖောင်ဒေးရှင်း (FO2011-0106, FO2012-0083 နှင့် FO2013 ကထောက်ခံခဲ့သည် PS မှ -0042) အားလုံး။ ကျနော်တို့သုတေသနသူနာပြုများမာဂရီတာ garde-Hedander နှင့် Else-Britt Hillner, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုဆေးဝါးများ၏ကိုင်တွယ်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကူအညီအတွက်စိတ်ပညာရှင် Angela Stünkelနှင့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားမာရီယာÖstman, လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းဒီဇိုင်းကိုအပေါ်သူ၏အရေးပါသော input ကိုများအတွက်ပါရဂူဘွဲ့ Anders Hammarberg ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
American Psychiatric Association, 2000 ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (4th ed ။ , စာသား Rev ။ ) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ။
Aron, AR, Dowson, JH, Sahakian, BJ နှင့် Robbins, TW Methylphenidate အာရုံကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူလူကြီးများအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးတိုးတက်ကောင်းမွန်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 54: 1465-1468
Boileau, ဗြဲ, Assaad, J.-M. , Pihl, ro, Benkelfat, C တို့, Leyton, အမ်, Diksic, အမ်, Tremblay, RE နှင့် Dagher, အေအရက်လူ့နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက် ။ synapses ။ 2003; 49: 226-231DOI: http://dx.doi.org/10.1002/syn.10226
Carlsson, အေနှင့် Carlsson, schizophrenia များ၏ ML တစ်ဦးက dopaminergic လိုငွေပြမှုအယူအဆ: ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှလမ်းကြောင်းကို။ ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience ။ 2006; 8: 137-142
Carlsson, ML, Carlsson, အေနှင့် Nilsson, အမ် Schizophrenia: dopamine ကနေအချိုမှုများနှင့်နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။ Curr ။ Med ။ Chem ။ 2004; 11: 267-277
Crabbe, JC, ဘဲလ်, RL နှင့် Ehlers, CL လူ့ခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်အနိမ့်တုံ့ပြန်မှု: ပိုကောင်း consilience ဖြစ်နိုင် ?. စှဲလမျးသူ Biol ။ 2010; 15: 125-144DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1369-1600.2009.00191.x
DeVito, EE, ဘလက်ဝဲလ်, အေဒီ, Clark က, အယ်လ်, Kent, အယ်လ်, Dezsery, Am, Turner, DC က, Aitken, MRF နှင့် Sahakian, BJ Methylphenidate အာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူသားသမီးများအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးသော်လည်းမရောင်ပြန်ဟပ်မှု-Impulse တိုးတက်ကောင်းမွန် (ADHD) ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) ။ 2009; 202: 531-539DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-008-1337-y
di Chiara, G. အများနှင့် Imperato လူသားများအားဖြင့်စော်ကားအေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 1988; 85: 5274-5278
ဒစ်ခ်, DM, အ Impulse ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်ရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုနားလည်ခြင်းစမစ်, G. အ, Olausson, P. , Mitchell က, SH, Leeman, RF, O'Malley, အက်စ်အက်စ်နှင့် Sher, K. ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2010; 15: 217-226DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1369-1600.2009.00190.x
European Medicines Agency က, 2010 ။ အရက်မှီခို၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးဖက်ဝင်ထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Guideline ။
Feltmann, K. , Fredriksson, ဗြဲ, Wirf, အမ်, Schilström, ခ, Steensland, P. , 2105, အဆိုပါ monoamine stabilizer ။ (-) - OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံး Wistar ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် downregulated dopamine output ကို counteracts ကြွက်များ။ စာနယ်ဇင်းများတွင်စွဲဇီဝဗေဒ။
Flannery, BA, Volpicelli, JR နှင့် Pettinati, အ Penn အရက်တဏှာစကေး၏ HM Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 1999; 23: 1289-1295
စတိန်း, RZ နှင့် Volkow, စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ ND အလုပ်မဖြစ်: neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2011; 12: 652-669DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nrn3119
Hammarberg, အေ, Jayaram-Lindström, N. , Beck, O. , Franck, ဂျေ, နှင့်ရိဒ်, က MS မှီခိုလူနာ priming အရက်-cue reactivity ကိုနှင့်အရက်အပေါ် acamprosate ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ Psychopharmacology (Berl ။ ) ။ 2009; 205: 53-62DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-009-1515-6
Heinz, အေ, Beck, အေ, Grüsser, SM, တော်ကကျေးဇူး, AA ကိုနှင့် Wrase, ဂျေအရက်သေစာတဏှာနှင့် relapse အားနည်းချက်များ၏အာရုံကြော circuitry ဖော်ထုတ်ခြင်း။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2009; 14: 108-118DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1369-1600.2008.00136.x
Heinz, အေ, Siessmeier, တီ, Wrase, ဂျေ, Buchholz, HG, Gründer, G. အ, Kumakura, Y. , Cumming, P. , Schreckenberger, အမ်, Smolka, MN, Rösch, အက်ဖ်, မန်း, K. နှင့် Bartenstein, striatal dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်နှင့် D2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူအရက်တဏှာ၏ P. ညမညသဘောတရား: တစ်ပေါင်းစပ် [18F] DOPA နှင့် detoxified အရက်သမားလူနာ [18F] DMFP ပေလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1515-1520DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.162.8.1515
Heinz, အေ, Siessmeier, တီ, Wrase, ဂျေ, Hermann, ဃ, Klein, အက်စ်, Grüsser, SM, Grüsser-Sinopoli, SM, Flor, အိပ်ချ်, Braus, DF, Buchholz, HG, Gründer, G. အ, Schreckenberger, အမ်, Smolka, MN, Rösch, အက်ဖ်, မန်း, K. နှင့် Bartenstein, dopamine: D (2) တို့အကြား P. ညမညသဘောတရားဟာ ventral striatum နှင့်အရက်တွေကိုနှင့်တဏှာ၏ဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် receptors ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161: 1783-1789DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.161.10.1783
Imperato, အေနှင့် Di Chiara, လွတ်လပ်စွာအီသနောသဖြင့်ကြွက်များရွေ့လျား၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေး G. အဦးစားပေးဆွ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1986; 239: 219-228
Johansson, ခ, Carlsson, အေ, Carlsson, ML, Karlsson, အမ်, Nilsson, MKL, Nordquist-Brandt, အီးများနှင့်Rönnbäck, အ monoaminergic stabilizer ၏အယ်လ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled Cross-ကျော်လေ့လာမှု (-) - လေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာအောက်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်အတွင်းရှိ OSU6162 ။ Acta အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ။ 2012; 24: 266-274DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-5215.2012.00678.x
အရက်မှီခိုလူနာ Impulse နှင့် relapse အပေါ် Joos, အယ်လ်, Goudriaan, AE, Schmaal, အယ်လ်, Fransen, အီး, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး, ဒဗလျူ, Sabbe, BGC နှင့် Dom, modafinil ၏ G. အ Effect: တစ်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2013; 23: 948-955DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2012.10.004
Kara-, အီး, လင်းအိပ်ချ်, Svensson, K. , Johansson, Am နှင့်ထူးဆန်း, ဝတ္ထု dopamine အဲဒီ receptor-ညွှန်ကြားဒြပ်ပေါင်းများဟာ D6162 dopamine အဲဒီ receptor မှာ (S) မ -OSU16 နှင့် ACR2 ၏အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို PG အားသုံးသပ်ခြင်း။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 2010; 161: 1343-1350DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.01010.x
Kloberg, အေ, Constantinescu, R. , Nilsson, MKL, Carlsson, ML, Carlsson, အေ, Wahlström, ဂျေနှင့် Haghighi, အက်စ်သည်းခံစိတ်နှင့် monoaminergic stabilizer ၏ထိရောက်မှု (-) - OSU6162 (အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ-96391A) Huntington ရဲ့ရောဂါအတွက်: တစ်ကို double-မျက်စိကန်းသော Cross-ကျော်လေ့လာမှု။ Acta အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ။ 2014; 26: 298-306DOI: http://dx.doi.org/10.1017/neu.2014.16
Koob, gf သီအိုရီမူဘောင်များနှင့်အရက်စွဲ၏ mechanistic ရှုထောင့်: အကျိုးကိုလိုငွေပြမှုရောဂါအဖြစ်အရက်စွဲ။ Curr ထိပ်တန်းပြုမူနေ neuroscience ။ 2013; 13: 3-30DOI: http://dx.doi.org/10.1007/7854_2011_129
Lahti, RA, Tamminga,, CA များနှင့် Carlsson, အေစိတ်ကြွဆေးနှင့် dopamine ၏ inhibitory သက်ရောက်မှု "stabilizer" (-) - OSU6162 စသည်တို့အတွက် dopamine D2 အဲဒီ receptor function ကိုအပေါ်။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 2007; 114: 1143-1146DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00702-007-0784-7
Impulse နှင့်တစ်ဦး IV အီသနောပါရာဒိုင်းအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုအကြား Leeman, RF, Ralevski, အီး, Limoncelli, ဃ, Pitmann ကခ, O'Malley, အက်စ်အက်စ်နှင့် Petrakis, IL ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ Psychopharmacology (Berl ။ ) ။ 2014; 231: 2867-2876DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-014-3458-9
Lejuez, CW, Magidson, JF, Mitchell က, SH, Sinha, R. , Stevens, MC နှင့်က de ကျေး, အိပ်ချ်အပြုအမူနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Impulse, ပြဿနာများ, နှင့်မမှန်များ၏ဇီဝညွှန်းကိန်း။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 2010; 34: 1334-1345DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-0277.2010.01217.x
တစ်ပေကို အသုံးပြု. အရက်မှီခိုအတွက် Lingford-Hughes, AR, Daglish, အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက, Stevenson, BJ, Feeney, အေ, ပန်ဒစ်, SA, Wilson က, SJ, Myles, ဂျေ, Grasby, လေး, မြားနှငျ့ Nutt, DJ သမား Imaging ကအရက် cue ထိတွေ့မှု 15O-H2O ပါရာဒိုင်း: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2006; 11: 107-115DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1369-1600.2006.00001.x
မတ်ေတာ, အေ, James D. နှင့် Willner, P. နှစ်ခုအရက်တဏှာမေးခွန်း၏အဖြေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ စွဲလမ်း။ 1998; 93: 1091-1102
အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာကုသမှုအတွက် Martinotti, G. အ, Di Nicola, အမ်, Di Giannantonio, အမ်နှင့် Janiri, အယ်လ် Aripiprazole: naltrexone vs. တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, နှိုင်းယှဉ်ရုံးတင်စစ်ဆေး။ ဂျေ Psychopharmacol ။ (အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်) ။ 2009; 23: 123-129DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0269881108089596
Martinotti, G. အ, Di Nicola, အမ်နှင့် Janiri, အယ်လ်ထိရောက်မှုနှင့်အရက်မှီခိုအတွက် aripiprazole ၏ဘေးကင်းမှု။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2007; 33: 393-401DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00952990701313660
Myrick, အိပ်ချ်, Li က, X တို့မှာ, Randall, PK, Henderson, အက်စ်, Voronin, K. နှင့် Anton, cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အရက်သမားအတွက်သောက်သုံးရေ parameters တွေကိုအပေါ် aripiprazole ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု RF ။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2010; 30: 365-372DOI: http://dx.doi.org/10.1097/JCP.0b013e3181e75cff
Narendran, R. , Mason ဆို, NS, ပဲရစ်, ဂျေ, Himes, ML, Douaihy, AB နှင့် Frankle, WG ကိုအရက်ထဲမှာ prefrontal cortical dopamine ဂီယာလျော့နည်းသွားသည်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 171: 881-888DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13121581
Natesan, အက်စ်, Svensson, ka, လူအ, GE, Nobrega, ဖြစ်မှု, Barlow, KBL, Johansson, Am နှင့် Kapur, အက်စ်အဆိုပါ dopamine stabilizer (S) မ - (-) - (3-methanesulfonyl-phenyl) -1 -propyl-piperidine [(-) - OSU6162] နှင့် 4- (3-methanesulfonylphenyl) -1-propyl-piperidine (ACR16) မွငျ့မားကိုပြသထဲမှာ Vivo D2 အဲဒီ receptor ထေို, antipsychotic ကဲ့သို့ထိရောက်မှုနှင့်ထဲမှာမော်တာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘို့အနိမ့်အလားအလာ ကြွက်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2006; 318: 810-818DOI: http://dx.doi.org/10.1124/jpet.106.102905
Nowak, KL, McBride, WJ, Lumeng, အယ်လ်လီ, TK နှင့်မာဖီသည်အရက်- သာ. နှစ်သက် P ကိုကြွက်များ၏အရက်နှင့် saccharin စားသုံးမှုအပေါ် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine D2 autoreceptors ၏ JM ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 2000; 24: 476-483
Papachristou, အိပ်ချ်, Nederkoorn, C တို့, Havermans, R. , Bongers, P. , Beunen, အက်စ်နှင့် Jansen, ရို Impulse နှင့်ဒီထက်ထိရောက်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အေအဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်ကိုပိုမိုပြင်းထန်သော cue-ရူးနှမ်းတဏှာနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် အရက်-မှီခိုလူနာအတွက်အရက်သည်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) ။ 2013; 228: 641-649DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-013-3063-3
Rodriguez,, CA, Azie, NE အဒမ်, G. အ, Donaldson, K. , Francom, SF, Staton, BA ဘွဲ့များနှင့် Bombardt, PA ဆိုပြီးလူပျိုပါးစပ်ထိုးဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သည်းခံစိတ်နှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ-96391 ၏ pharmacokinetics ။ J ကို Clin Pharmacol ။ 2004; 44: 276-283DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0091270003262792
တဘက်တချက်, JP, တဘက်တချက်, အီး, Helgeson, အယ်လ်, Johansson, Am, Svensson, K. , Carlsson, အေနှင့် Carlsson ၏ ML အကျိုးသက်ရောက်မှု (-) - OSU6162 နှင့် ACR16 ကြွက်များတွင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ညွှန်း dopaminergic တည်ငြိမ်၏ယန္တရား။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 2008; 115: 899-908DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00702-008-0038-3
Schmaal, အယ်လ်, Joos, အယ်လ်, Koeleman, အမ်, Veltman, DJ သမား, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး, ဒဗလျူနှင့် Goudriaan, အရက်-မှီခိုလူနာအတွက်တုန့်ပြန်တားစီး၏အာရုံကြောဆက်စပ်အပေါ် modafinil ၏ AE အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 73: 211-218DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.06.032
Seeman, P. နှင့်ဂွမ်, H.-C. (-) ၏ Dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အရေးယူ OSU6162 စိတ္တအတွက် dopamine hyperactivity နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 2007; 557: 151-153DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2006.11.016
Sobell, L. နှင့် Sobell, အမ် Timeline ကို Follow-ကျော: Self-အစီရင်ခံအီသနောစားသုံးမှုအကဲဖြတ်ဘို့တစ် technique ကို။ အတွက်: R. Litten, ဂျေအယ်လန် (။ Eds) အရက်စားသုံးမှုတိုင်းတာခြင်း: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒနည်းလမ်းများ။ Humana စာနယ်ဇင်း, Totowa, NJ; 1992: 41-72
Sonesson, C တို့, လင်း CH, Hansson, အယ်လ်, ရေ, N. , Svensson, K. , Carlsson, အေ, Smith ကမီဂါဝပ်နှင့်Wikström, အိပ်ချ်အစားထိုး (S) မ -phenylpiperidines နှင့်တင်းကျပ် congeners ဦးစားပေး dopamine အဖြစ် autoreceptor ရန်: ပေါင်းစပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-လှုပ်ရှားမှုဆက်ဆံရေး။ ဂျေ Med ။ Chem ။ 1994; 37: 2735-2753
Stavros, K. , Pelletier, ဂျေနှင့် Potvin, အရက်ထဲမှာအက်စ်နေရာအနှံ့နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သိမြင်လိုငွေပြမှု: တစ် Meta-analysis သည်။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2012; Doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1369-1600.2011.00418.x
Steensland, P. , Fredriksson, ဗြဲ, Holst, အက်စ်, Feltmann, K. , Franck, ဂျေ, Schilström, ခနှင့် Carlsson, အေဒီ monoamine stabilizer (-) - OSU6162 မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုနှင့် ethanol- attenuates နျူကလိယ accumbens အတွက်သွေးဆောင် dopamine output ကို။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 72: 823-831DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.06.018
Svanborg, P. နှင့် Asberg, အမ်ဟာ Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) နှင့် Montgomery Asberg စီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး (Madre) ၏ Self-rating ဗားရှင်းအကြားတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2001; 64: 203-216
ဆွစ်ဖ်, အရက်လူနာကုသမှုထဲမှာ dopaminergic system ပေါ်တွင်သရုပ်ဆောင် R. ဆေး။ Curr ။ Pharm ။ des ။ 2010; 16: 2136-2140
Tedroff, ဂျေ, Ekesbo, အေ, Sonesson, C တို့, ရေ, N. နှင့် Carlsson, အောက်ပါအေ Long-ရေရှည်တိုးတက်မှု (-) - OSU6162 Huntington ရဲ့ရောဂါအတူလူနာအတွက်။ အာရုံကြော။ 1999; 53: 1605-1606
Tedroff, ဂျေ, Torstenson, R. , Hartvig, P. , Sonesson, C တို့, ရေ, N. , Carlsson, အေ, Neu, အိပ်ချ်, Fasth, KJ နှင့်Långström, ထိုအစားထိုး (S ၏ခအကျိုးသက်ရောက်မှု ) -3-phenylpiperidine (-) - OSU6162 subhuman မျောက်ဝံများအတွက်ပေတိုင်းတာအပေါ်: striatal dopaminergic လှုပ်ရှားမှုသေံ-မှီခိုပုံမှန်အဘို့သက်သေသာဓက။ synapses ။ 1998; 28: 280-287DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-2396(199804)28:4<280::AID-SYN3>3.0.CO;2-5
Tolboom, N. , Berendse, HW, Leysen, je, Yaqub, အမ်, ဗန် Berckel, BN, Schuit, RC, Ponsen, MM, Bakker, အီး, Hoetjes, NJ, Windhorst, အေဒီ, Carlsson, ML, Lammertsma, AA ကိုနှင့် Carlsson, အေဒီ Dopamine တည်ငြိမ်မှု (-) - OSU6162 Striatal Dopamine D2 / D3 receptor ၏ Subpopulation ယူထားသော: တစ်ဦး [(11) ကို C] Raclopride ပေလေ့လာမှုကျန်းမာရေးလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2014; Doi: http://dx.doi.org/10.1038/npp.2014.195
Tupala, အီး, ခန်းမ, အိပ်ချ်, Bergström, K. , Särkioja, တီ, Rasanen, P. , Mantere, တီ, Callaway, ဂျေ, Hiltunen, ဂျေနှင့် Tiihonen, ဂျေ Dopamine: D (2) / D ကို (3) နျူကလိယ accumbens နှင့်အမျိုးအစား 1 နှင့်2အရက်သမား၏ amygdala အတွက် -receptor နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထု။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 6: 261-267DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.mp.4000859
Turner, DC က, Robbins, TW, Clark က, အယ်လ်, Aron, AR, Dowson, ဂျေနှင့် Sahakian, BJ သိမှုကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် modafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်။ Psychopharmacology ။ 2003; 165: 260-269
Volkow, ND, ဝမ်, GJ, မုဆိုး, JS, Logan, ဂျေ, Hitzemann, R. , Ding, YS, Pappas, N. , Shea, C တို့နှင့် Piscani, K. dopamine receptors အတွက်မဟုတ် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နည်းချင်နည်း အရက်သမား၌တည်၏။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 1996; 20: 1594-1598
Volkow, ND, ဝမ်, G.-J. , Telang, အက်ဖ်, မုဆိုး, JS, Logan, ဂျေ, ဂြနျေး, အမ်, မာရင်းကျိုသည် Y. , Pradhan, K. နှင့် Wong, C. လေးနက်တဲ့လျှောက်လျော့နည်း dopamine အတွက် detoxified အရက်သမားအတွက် striatum အတွက်ဖြန့်ချိ: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2007; 27: 12700-12706DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3371-07.2007
Voronin, K. , Randall, P. , Myrick, H. , နှင့် Anton, R. Aripiprazole အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု၏ချုပ်တည်းမှုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ 2008: 32-1954DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-0277.2008.00783.x
Weiss, RD, O'malley, အက်စ်အက်စ်, Hosking, JD, Locastro, JS, ဆွစ်ဖ်, R. နှင့်လေ့လာမှုသုတေသန Group မှပေါင်းစပ်။ အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာရလဒ်များအရအိပ်ယာတုံ့ပြန်သလား? အဆိုပါပေါင်းစပ်လေ့လာရာမှရလဒ်များ။ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2008; 69: 878-884